पोकरडम क्यासिनो बोनस कोड | सर्वश्रेष्ठ पोकरडो क्यासिनो कुनै निक्षेप बोनस पोकरडम क्यासिनो फ्रि चिप | पोकरडम क्यासिनो फ्रि स्पिनहरू, 2020 #1
पहिलो, त्यहाँ टेक्सासको खेलमा5मुख्य 'राउन्ड' छन्:
त्यहाँ पनि5निर्णयहरू तपाईं टेक्सासमा हस्त गठनको समयमा बनाउन सक्नुहुन्छ।
• बेट - चिप्सको सुरुवात रकम बर्तनमा तालिका वा पैसामा राख्नको लागि।
• कल - अघिल्लो खेलाडीको शर्तसँग मेल खान्छ।
• उठाउनुहोस् - अघिल्लो खेलाडीको तुलनामा चिप्सको वृद्धि गरिएको रकम दाबी गर्न।
• मक (वा तह) - हात छोड्न र तपाईंको कार्डहरू डेलरमा फर्काउन दिनुहोस्।
• चेक - यस बिन्दुमा कुनै निर्णय गर्न छनौट गर्न छनौट गर्न। तपाईंले राउन्डको समयमा पछि निर्णय गर्न दायित्व हुन सक्नुहुनेछ।
व्यापारी बटन र ब्लाइन्ड
खेल एक खेलाडीले प्रत्येक खेलाडिलाई निलम्बित गरेको छ। देखाइएको उच्चतम कार्डको साथ खेलाडीले डेलर बटनको रूपमा नियुक्त गरिन्छ। प्रत्येक पछिको हात एक खेलाडीसँग सुरु हुन्छ जसले डीलर बटन प्राप्त गर्दछ जसले घडीको दिशामा प्रत्येक खेल पछि तालिकालाई पारित गर्यो। कार्डहरू घडीको दायाँतिर डीलर पछ्याउने व्यक्तिसँग घडीको सुरुवात हुन्छ। एक अनलाइन वातावरणमा, टेबलहरू लगातार सक्रिय छन्, त्यसैले तपाईले मेजमा सामेल हुँदा व्यापारी बटनको स्थिति सामान्यतया स्थापित भएको छ। दलर बटन द डेलरको सैद्धांतिक स्थिति को प्रतिनिधित्व गर्दछ। एक जीवित वातावरणमा, यो व्यक्तिले वास्तवमा कार्डहरू सम्झन सक्छ, तर प्रायजसो क्यासिनोहरूमा, र निश्चित रूपमा अनलाइन, हाउस (ठाउँ) ले कार्डहरू लिन्छ।
फ्लप पहिले, दुई ब्लाइन्ड बेटहरू एक सुरुवात बर्तन बनाउनका लागि बनाइन्छ। अन्धा शर्तहरू दुई खेलाडीहरू द्वारा डिलरको बायाँतिर बसिरहेका छन्। प्लेयर बटनको छेउमा बस्छ, पोष्टहरू (शर्तहरू) सानो ब्लाइन्डको रकम। यो निम्न तालिका सीमाको आधा सेट भएको छ। हाम्रो 20 / 40 उदाहरणमा, यसले 10 USD हुनेछ। उनको बायाँ पदहरूलाई खेलाडी ठूलो ब्लाइन्ड। यो निचला सीमा बराबर (हाम्रो उदाहरणमा 20 USD बराबर रकम) मा सेट गरिएको छ। यी बाध्यता शर्तहरूले यो सुनिश्चित गर्न को लागि कि मान्छे को लागि प्रतिस्पर्धा को लागि एक बर्तन हो। तिनीहरूलाई सानो र ठूलो भनिन्छ, स्पष्ट कारणहरूका लागि - यसको सापेक्ष आकारको कारण। उनीहरूलाई ब्लाइन्ड भनिन्छ किनभने खेलाडीहरूले यी शर्तहरू कुनै कार्डहरू प्राप्त गर्नु अघि र तिनीहरूका हातमा अन्धा छन्। यो यी खेलाडीहरूको लागि अयोग्य लाग्न सक्छ, तर सम्झना, डेलर बटन अर्को पटक वरिपरि चल्नेछ र दुई नयाँ खेलाडीहरू साना तथा ठूला ब्लाइन्ड हुनेछन्। यसले सबैलाई द डेलर, सानो ब्लाइन्ड र ठूलो ब्लाइन्ड प्राप्त गर्न सुनिश्चित गर्दछ।
यदि कुनै पनि कारणको लागि, तपाईले छोटो सानो वा बिग ब्लाइन्ड पोस्ट गरिरहनु भएको छ - टेबल छोडेर (जस्तै "बाहिर निस्केको" भनिन्छ), तपाइँ तालिकामा फर्केपछि एक पटक सजाय दिन सकिन्छ:
सानो ब्लाइन्ड हराइरहेको छु - तपाईले बिग ब्लाइन्डमा मूल्यमा दण्डको बराबर तिर्नुपर्छ। यो व्यक्तिको लागि स्वाभाविक रूपमा बिग ब्लाइन्ड भएको व्यक्तिको लागि थप रकम हो।
ठूलो ब्लाइन्ड वा हराएको छु - सानो र बिग ब्लाइन्ड - तपाईले बिग ब्लाइन्डमा मूल्यमा दण्डको बराबर तिर्नुपर्छ, र अर्को एक सानो ब्लाइन्डको बराबर। यो सानो रकम सिट (सिन्धुपाल्चोक / चिप्स जुन जुआन्छ) मा सिधा जान्छ र खेलको लागि प्लेयरको शर्तमा गणना गर्दैन। यसलाई मृत बे भनिन्छ।
प्रत्येक प्लेयरले दुई अनुहार-कार्डहरू प्राप्त गर्दछ (होल कार्ड, जेब कार्ड) पनि। ठूलो ब्लिन्ड पदको बायाँतिर बसेर व्यक्तिले कार्य गर्ने पहिलो हो। यस दौरमा, उहाँसँग तीनवटा विकल्प छन्। उहाँ कल गर्न सक्नुहुन्छ, उठाउनुहोस् वा चुरोट। यदि उसले बेकार गर्छ भने, पहिले नै उल्लेख गरिएको छ भने, उहाँले आफ्नो हात फेंकदिनुहुन्छ, र कार्यवाही बायाँमा अर्को खेलाडी पास हुन्छ। यदि उहाँले कल गर्नुहुन्छ भने, उहाँले बिग ब्लाइन्डको मानसँग मेल खान्छ भन्ने शर्तमा (20 USD हाम्रो 20 / 40 उदाहरणमा)। यदि उसले निश्चित सीमा खेलमा उठाएको छ भने उसले केवल 20 USD सम्म बढ्न सक्दछ, 40 USD सम्म।
निश्चित सीमा खेलमा, त्यहाँ अधिकतम 1 प्रारम्भिक शर्त हो र तीन एक एकल राउन्डमा उठ्छ। सबै तीन प्रकारको उचाइहरू विशिष्ट नामहरू छन्:
• पुन: उठाउनुहोस्
हाम्रो 20 / 40 उदाहरणमा फ्लपको बेलामा प्रारम्भिक शर्त 20 USD हुनेछ, उचाई थप 20 USD हुनेछ - यस अर्थमा खेलाडीले 40 अमेरीकी डालर हुनेछ, पुन: उचाई 60 USD सम्म हुनेछ र क्याप अर्को 20 हुनेछ। USD जुन 80 USD मा हुन्छ। टोपी गरे पछि, यस राउन्ड को समयमा र अधिक अनुमति छैन। सम्झनुहोस्, शर्तहरू र टर्न र नदीमा उठाइनेछ उच्च सीमामा गरिनेछ (हामी पछि यो देख्नेछौं)। अन्ततः, अनुमति उठाउने परिणाम निम्न देखिन्छ: शर्त, उचाई, पुन: उठाउनुहोस्, क्याप।
अब खेलमा फर्कनुहोस्। कार्य तालिकाको घडीको दिशामा जारी छ, प्रत्येक खेलाडीले कल गर्न चाहने निर्णय गरेको छ, बढावा गर्न वा चकनाचुम्बी हुन्छ, जब सम्म यो सानो ब्लिन्ड पोइन्टमा खेलाडी पुग्छ सम्म। अनुमति दिनुहोस् कि सबैलाई भनिन्छ। हाम्रो 20 / 40 उदाहरणमा, यो मतलब हुनेछ कि तिनीहरूले सबै प्रतिबद्ध 20 USD बर्तनमा छ। त्यसैले अहिले यो सानो ब्लाइन्डको पालो हो। सम्झनुहोस्, राउन्डको सुरुवातमा यो व्यक्तिले पहिले नै निचला सीमाको बराबरको बराबरको बराबर शर्त लगाएको छ (हाम्रो उदाहरणमा 10 USD)। यसको कारण, यदि यो प्लेयरले कल गर्न निर्णय गर्दछ, उसले केवल 10 USD लाई बर्तनमा (कुलमा 20 USD बनाउन को लागी) थप्नेछ। निस्सन्देह उसले पनि 40 USD वा चुरोट बढाउन सक्छ।
त्यसोभए जब क्रिया बिग ब्लाइन्डमा जान्छ। यस प्लेयरले पहिले नै 20 USD लाई बर्तनमा गरेको छ। सैद्धान्तिक रूप देखि, पूर्व-फ्लॉप लाई समझाईन्छ, किनकी सबैले एउटै मात्रामा यो प्रतिबद्धता गरेको छ तर, बिग ब्लाइन्डको एक मात्र स्थान हो जसले अहिलेसम्म आफ्नो कार्डहरूमा आधारित निर्णय गरेन भने, यो यसमा गर्न अनुमति छ विशिष्ट पल। उहाँले (40 USD सम्म) बढ्न सक्नुहुनेछ, जाँच गर्नुहोस् वा चक्कु। सामान्यतया, एक खेलाडी तालिकामा पैसा जाँच गर्दा जाँच गर्न सक्दैन, तर, यस विशिष्ट अवस्थामा, ठूलो ब्लाइन्ड पोष्टमा खेलाडीले वास्तवमा जाँच गर्न सक्दछ।
यो सम्झना पनि महत्त्वपूर्ण छ कि, अधिकतर अवस्थामा, यदि तपाईसँग अझै विकल्प छ भने, विशेषतया खेलको शुरुवातमा र राउन्डको पहिलो जोडामा, तपाईले आफ्नो हातमा चकित पार्नुको सट्टा राम्रो तरिकाले जाँच गर्नुपर्छ। यसले तपाईँलाई अझ अवसरहरू प्रदान गर्दछ किनकि तपाइँ अझै खेलमा हुनुहुन्छ र तपाइँ सधैँ कार्डहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंको हात बढाउनेछ। यदि बिग ब्लाइन्डको स्थितिमा खेलाडीले उठाउने निर्णय गर्छ भने, खेलले परम्परागत रूपमा घडीको तालिका जारी राख्छ जबसम्म सबै खेलाडीहरूले आफ्नो कार्डहरू बोलाए वा पिसाब गरे। सबै नियमित राउन्डको अन्त्यमा, खेल जारी रह्यो जबसम्म सबै खेलाडीहरूले पोष्टमा एकै मात्रामा पैसा कमाएका छन्, वा तिनीहरूको कार्ड बेक्यो। हालको उदाहरणमा, हामी हाम्रो बिग ब्लाइन्ड प्लेयर जाँच गर्नेछौं।
त्यसोभए, पूर्व-फ्लपको राउन्ड समाप्त भएको मानिन्छ र सबै चिप्स एकत्रित गरिन्छ र तालिकाको मध्यमा राखिन्छ।
व्यापारीलाई तीन फेस-अप कार्डहरू तालिकामा लिन्छ। यी कार्डहरू परम्परागत रूपमा सामुदायिक कार्डहरू वा बोर्ड कार्ड भनिन्छ र, नामको रूपमा, यी कार्डहरू टेबलमा सबै खेलाडीहरूद्वारा साझेदारी गर्नका लागि उनीहरूको पोकर हातहरू पूरा गर्न मद्दत पुर्याउँछन्। जब सामुदायिक कार्डहरू निलम्बित हुन्छन्, निर्णय गर्न आवश्यक पहिलो व्यक्ति डीलर बटनको बायाँको खेलाडी हो। सामान्यतया यो सानो ब्लिन्ड पोइन्टमा व्यक्ति हो, तर जब मासुले चकित गरेको छ, त्यसपछि अर्को खेलाडीले क्रिया सुरु गर्ने पहिलो हो। यो खेलाडीले चेक वा शर्त गर्न सक्दछ। त्यसोभए कारवाही जारी छ जबसम्म प्रत्येक खेलाडीले जाँच गर्ने मौका पाएको छ भने कल (यदि शर्त भएको छ वा उठाइन्छ), उठाउनुहोस् वा अनुहार। एक चोटि एक शर्त वा उठाउने बेला, प्रत्येक खेलाडीले बनाएको शर्तसँग मेल खान्छ, पुन: उठाउन वा जारी राख्न कार्यको लागि चकित गर्नु पर्छ। सबै खेलाडीहरू गोलको समयमा जाँच गर्न सामान्य छ। यस अवस्थामा, कुनै पैसा बर्तनमा थपिनेछैन, र राउन्ड समाप्त हुनेछ।
राउन्डको अन्त एक पटक सबै खेलाडीहरूले (बुझाएको) भनिन्छ, र एक बराबर राशिको शर्त छ।
डीलरले चौथो अनुहार सामुदायिक कार्डलाई तालिकामा राख्छ। फेरि, खेलाडीहरू, डेलरको बायाँ खेलाडीसँग सुरू गर्न मिल्दैन, दाँया वा चिरचुम्की चकित हुन सक्छ। वैसे पनि, यस राउन्ड (र निम्न) मा, सबै खेलाडीहरूले तालिकाको उच्च सीमा अनुसार शर्त र उठाउनुपर्दछ। हाम्रो उदाहरण पछ्याउने शर्तको अधिकतम मात्रा र यस राउन्डमा उठाउनुहोस् 40 USD। यो क्रियाकलाप जारी छ, पहिले नै, सबै खेलाडीले अन्तैमा एकै मात्रामा दाखिला गरे, वा उनीहरूको हात हल्लाउँदै। फेरि, यस राउन्डमा सबै चिप्स शर्त तालिकाको केन्द्रमा राखिएको छ।
डीलरले 5th अनुहार कार्डलाई सौदा गर्छ र यो तालिकामा अन्तिम सामुदायिक कार्ड हो। प्रत्येक प्लेयरमा अब कुल सात कार्डहरू छन्: उनीहरूको दुई छेद कार्डहरू र तालिकामा पाँच समुदाय कार्डहरू छन्)। यी कार्डहरू सर्वश्रेष्ठ पाँच कार्ड संयोजन गर्न सेवा गर्छन्। फेरि, डीलर को छोडेर खेलाडीलाई कार्य गर्ने पहिलो हो र कार्य तालिकाको वरिपरि अघि जस्तै जस्तै।
महत्त्वपूर्ण नोट: यो, वा कुनै अन्य राउन्डमा, यदि खेलाडीले शर्त वा उठाउँछ र सबै अन्य खेलाडीहरू उनीहरूको कार्डहरू बेच्न सक्छन् - हात माथि र खेलाडीले अन्तिम शर्त बनाएको हो भने सबैले स्वचालित रूपमा हात जित्छ। बिन्दुको छेउमा, विजेता आफ्नो हात देखाउन बाध्य छैन, यद्यपि उसले त्यो बिन्दुलाई बिस्तारै सबै पैसा सङ्कलन गर्दछ।
यदि खेल अझै प्रगतिमा छ र सबै वा खेलकुदको भाग अझै टाढामा छ, नदी पछि, बाँकी खेलाडीले प्रदर्शनको नामको अन्तिम चरणमा विजेता निर्धारण गर्नका लागि तिनीहरूको कार्डको तुलना गर्नु पर्छ। परम्परागत रूपमा, उच्च रैंकिङ हातको साथ खेलाडीले हात जित्छ र बर्तन पकडाउँछ। यदि दुई वा बढी खेलाडीहरू समान हात छन् भने, उनीहरूको बीच कुनै बेरिएको अनियमित चिप (हरू) द डेल्टरको बायाँतिर जाने खेलाडीको बीचमा विभाजित हुन्छ।
यदि तपाइँ टेक्सास होल्डमको व्यावसायिक संस्करण खेल्दै हुनुहुन्छ र यस खेलको सबै विशिष्टताहरूमा रहन चाहानुहुन्छ, निम्न ढाँचालाई सम्झनुहोस् जसले कसरी खेलाडीहरूले कार्डहरू प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेर देखाउँछ। आफ्नो नदी देखाउन पहिलो व्यक्ति अन्तिम व्यक्ति हो जब नदीमा बेल्ट वा उठाउँदै आक्रामक कार्य लिन। उदाहरणका लागि, यदि सानो ब्लिन्ड पोइन्ट जाँचमा खेलाडीले ठूलो ब्लिन्ड पोष्टले 40 USD खरिद गर्दछ र सबैलाई कल गर्दछ। यस्तो स्थितिमा, बिग ब्लाइन्ड पोष्टमा खेलाडीले आफ्नो कार्डहरू पहिलो पटक देखाउनेछ। यद्यपि, यदि कसैले अरूलाई उठाएको (र सबैले बोलाएको वा चकित) भने, त्यसपछि त्यो व्यक्ति आफ्नो कार्ड देखाउने पहिलो हो। यदि उनको बायाँको खेलाडीले त्यो हातलाई पराजित गर्न सक्छ भने, उनीहरूले आफ्नो कार्ड प्रदर्शन गर्न एक हुनेछ। यद्यपि, यदि उनीहरूको कमजोरी छ भने, तिनीहरू तिनीहरूका गुप्त हात देखाउन बाध्य छन् र मात्र चकित हुन सक्दैनन्। एकपटक सबै खेलाडीहरूले आफ्नो हात (वा चक्कु) प्रदर्शन गरेपछि खेलाडीले उच्चतम दृष्य हातले खेलाडीलाई बर्तन जित्छ।
अर्को के हुन्छ?
द शोडाउन पछि, सबै कार्डहरू डीलरमा फर्केका छन्, विजयी खेलाडीले आफ्नो चिप्सहरू सङ्कलन गर्छ र डेलर बटन अर्को खेलाडीमा घडीको दिशामा सारियो। यो कार्य, पहिले उल्लेख भएको, डीलर, सानो ब्लाइन्ड र ठूलो ब्लाइन्ड घुमाईएको छ भनेर सुनिश्चित गर्दछ, सुनिश्चित गर्नुहोस् कि सबै खेलाडीहरू तालिकामा सबै पदमा प्ले हुन्छन्।
पट सीमा खेलहरू मात्र हुन्। खेलाडीहरू तालिकाको वर्तमान सीमा बीचमा (पूर्व-फ्लपको समयमा कम सीमा र फ्लप र टर्न र नदीको दौडान उच्च सीमा), र बर्तन र तालिकामा अधिकतम रकम बीचमा पुग्न सक्छ।
उदाहरणका लागि: हामी फ्लपको समयमा एक 20 / 40 खेलमा सामेल हुनुपर्दछ। त्यहाँ 200 USD बर्तनमा छ र सानो ब्लाइण्डको स्थितिमा खेलाडीले 20 USD शर्त बनाएको छ। अर्को प्लेयरले 20 USD लाई कल गर्न आवश्यक छ। कुल बर्तन 240 USD (200 (पोट) + 20 (1st प्लेयरको बिट) + 20 (तपाईंको फोन) बनाउनुहोस्। यस अवस्थामा, तपाईं 240 USD सम्म उठ्न सक्नुहुन्छ।
उदाहरणका लागि, तपाईले 160 USD ले बढाउनुभयो। अब त्यहाँ बत्तीमा 400USD छ। अर्को प्लेयरले कम्तीमा तपाईँको 180 USD शर्तमा कल गर्नुपर्छ। यसको मतलब अब त्यहाँ 580 USD तालिकामा (200 (पट) + 20 (1st प्लेयरको बिट) + 180 (तपाईंको शर्त र उठाउनुहोस्) + 180 (अर्को प्लेयरको कल)। उसले तालिका सीमा (लोअर वा उच्च, हाम्रो उदाहरणमा 20 USD वा 40 USD) र 580 USD।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, बर्तनको आकार बढ्दो रूपमा बढ्छ र, यसको कारण, यो प्रकारको पोकर कहिलेकाहीँ निश्चित सीमा एक भन्दा बढी सीमित खेलको बारेमा विचार गर्न सकिन्छ।
धेरै सरल, नामको रूपमा, कुनै सीमा खेलमा समावेश गर्दछ, खेलाडीहरू गोल र उनीहरूको कुल राशिको सीमा बीचमा केही शर्त हुन सक्छ। तपाईंको सबै चिप्सहरू बिच गर्दै, कुनै पनि पोकर गेममा 'सबै इन' भनिन्छ। यो हुन सक्छ किनभने तपाईं आफ्नो चिप्स को पूरा राशि को द्वारा उठाएर चुन्नुहोस या, किनकि तपाईं उस विशेष हात को समयमा चिप्स को बाहिर भाग चुके हो।
नोट: चिपकाउने चिप्स पोकरको हातले कडा रूपमा निषेध गरिएको छ।
यदि, हातको बेला, एक खेलाडी चिप्सबाट बाहिर जान्छ, तर अन्य खेलाडीहरूले शर्त जारी राख्छन्, त्यसपछि प्वाइन्टमा सबै खेलाडीहरू शर्तमा खेलाडीमा विभाजित हुन्छ। सबै खेलाडीहरू द्वारा गरिएका सबै पछि शर्तहरू अलग "साइड पोट" मा राखिएका छन्। द शोडाउनमा, मूल खेलाडी मात्र मुख्य पटको लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै हुनुहुन्छ, जसले उनले योगदान दिए। अन्य सबै खेलाडीहरू BOTH बटका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। एक भूमिमा आधारित वातावरणमा, छेउको बर्तनको विजेता पहिलो हो।
कहिलेकाँही, तपाईं धेरै पक्ष बर्तन देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि, त्यहि नियमहरू यहाँ लागू हुन्छन्। एकपटक फेरि, खेलाडीले मात्र योगदान दिएका पोष्ट (हरू) को लागि मात्र प्रतिस्पर्धा गर्छन्।
ओमाहा एक टेक्सास होल्डम भिन्नता हो जुन लगभग समानता संग एकमात्र अपवाद थियो - खेलाडीले4छेद कार्डहरू निस्किएको छ जसको सट्टा टेक्सास होल्डममा दुई को बट्टा तल निस्कन्छ।
याद राख्नुहोस्, यो तथ्यलाई ध्यान दिंदै यो महत्त्वपूर्ण छ, तपाईले गर्दा गर्दा तपाइँले कार्ड भोल्युम परिभाषाको साथ केहि समस्याहरू सम्भव छ। यो भव्य उदाहरणमा एउटा अवलोकन लिनुहोस्:
तपाईंको छेद कार्डहरू हुन्: 5h - 10s - Js - As।
सामुदायिक कार्डहरू हुन्: 3d - 4d - 6c - 7c - KH।
तपाईं अचम्म लाग्न सक्छ तर यहाँ, न त तपाईं एस उच्च र न त विधै 3-4-5-6-7 सँग फ्लश बनाउनुहुनेछ। यस विशिष्ट मामलामा, एकअर्का सबैभन्दा राम्रो संयोजन एस उच्चको साथ एक हात हो।
र यहाँको लागि उत्तम जवाफ तपाई किन निम्न हुनेछ: ओमाहा होल्डममा तपाईंको संयोजन केवल दुईवटा होल कार्डहरू र तालिकामा5बाहिर तीनबाट सिर्जना गरिएको छ।
ओमाहा उच्च लोमा विजेता संयोजन बनाउन तपाईंले एक पोकर संयोजन जसमा5कार्डहरू समावेश गर्नुपर्दछ जसमा उच्चतम कार्ड यो 8भन्दा उच्च हुँदैन। एक लो हात संयोजन सिर्जना गर्न एक अक्ष सबैभन्दा सानो कार्डको रूपमा प्रयोग गर्न सक्दछ (एस दुवै उच्चतम र ढोका हुन सक्ने सम्बद्ध संयोजनहरू बनाउन मद्दत गर्न सक्छ), सिधा र फ्लश यहाँ संयोजनको रूपमा गणना गरिएको छैन।
माथि उल्लेखित अनुसार, ओमाहा हाई लोमा सबैभन्दा राम्रो हातले 5-4-3-2-Ace समावेश गरेको अनुमान लगाउन सजिलो छ। र फेरि, त्यो मनमा राख्नुहोस्, सिधा र फ्लश यहाँ गणना गरिएको छैन। वा पनि यदि तपाईंको सबै5कार्डहरू समान सूट (उदाहरणका लागि सबै हृदयहरू) पहननेछन्, र यदि फ्लश गणना गरिएको छैन, हो, यो ओमाहा उच्च लोका लागि आदर्श संयोजन हुनेछ। र तपाईलाई पनि याद छ कि कुनै जोडा यहाँ उच्च हुनेछ। त्यसो भएमा, 2-2-4-5-A ले "लो" संयोजन गर्नेछैन।
जब कुनै पनि खेलाडीले ढोका हात बनाउन सफल भए, एक खेलाडीले उच्चतम हात जित्छ। यसको विपरीत, जब एई दुई खेलाडीहरू, उच्चतम हातमा र अर्कोमा एकले अर्कोलाई बैंक विभाजित गर्नेछ। दुर्लभ अवस्थाहरूमा एकमात्र हातमा दुवै सम्मिश्र संयोजकहरूले बैंकको उच्च र लो भागहरू लिनेछन्। यस खेलको एक कोर्समा एक खेलाडीले उच्च हातलाई पहिलो र केवल तब बनाउँदछ (जब सम्भव छ) एक लो हात सिर्जना गर्नुहोस्। र त्यही नियम प्रदर्शनको लागि कार्य गर्दछ: उच्चतम हात विजेता पहिलो हो।
ओमाहा उच्च लो कसरी खेल्ने?
यो पहिले नै भनिएको छ, खेल लगभग टेक्सास होल्डम जस्तै एक मात्र दुई मतभेदको रूपमा खेलिएको छ: खेलाडीले टेक्सास होल्डमा दुई जस्तै बरु4छेद कार्डहरू लगाएका छन् र दोस्रो भिन्नता यो हो कि सम्पूर्ण बर्तन दुई भागहरु मा विभाजित छ - एक उच्च हात र एक को लागि अर्को। प्रत्येक खेलाडीलाई उच्च हातको लागि5कार्ड संयोजन बनाउन र लो एक लागि लो संयोजनको लागी मानिन्छ। सबै जीत समान रूपमा विभाजित हुन्छ। यदि कुनै पनि खेलाडीहरूले एक लो हात हात संयोजन गर्न सफल भएमा - सम्पूर्ण बर्तनले उच्चतम हातको साथ प्लेयरमा आउँछ। यदि एक खेलाडीले उच्च र ढोका दुवैलाई जित्छ - उसले सम्पूर्ण बर्तन लिन्छ।
ओमाहा उच्च लो रणनीतिहरु
वैकल्पिक रूपमा टेक्सास होल्डमलाई प्रत्येक खेलाडीले4छेद कार्डहरू निस्क्रिय गरेको छ। तपाईले पनि सम्झनु पर्छ कि यो खेल कम्तिमा आधारभूत रणनीति परिभाषित गरेको खेलाडीहरूको लागि बेवास्ता हुने हुनेछ। यो विशेष गरी महत्वपूर्ण हुन्छ जब कम खेलाडी खेलको पहिलो चरणमा गुड्छ। तपाइँ प्रक्रियामा किन कारण बुझ्नुहुन्छ।
ओमाहा उच्च लो रणनीति -2+3सम्झनुहोस्
तपाईंको सम्भावना संयोजन सही रूपमा मूल्याङ्कन गर्नको लागि, तपाई सधैँ ध्यान राख्नुहुन्छ कि तपाईंको चार कार्डहरू मध्ये मात्र दुई को तालिकामा5कार्डहरू मात्र तीन बाहिर संयोजनको लागि आवश्यक छ। सम्भव बलियो हात चिन्नको लागि यो नियम सम्झनको लागि अति महत्त्वपूर्ण छ। अर्कोतिर यदि तपाईँले यसलाई विशेष ध्यान दिनुहुन्न भने खेलको दिशामा तपाईंको हातले तपाईंलाई अपेक्षा भन्दा बढी देखा पर्न सक्दछ। सबै भन्दा राम्रो लो-ह्यान्ड संयोजनको रूपमा बनाउनुहोस्, यो यो2आधारलाई बुझ्न र सम्झनका लागि अत्यधिक सिफारिस गरिएको छ। नियमहरू:
1। तपाईंको संयोजनमा कुनै जोडी जोडीहरू नदिनुहोस्
2। तपाईंको हातमा उच्चतम एकल कार्ड मान 8 भन्दा बढि हुन सक्छ
ओमाहा उच्च लो रणनीति नट लो
सबै भन्दा पहिले हामी "पागल लू" को परिभाषा दिन दिन्छौं। नट लो लो हातको अर्थ हो कि सबै भन्दा शक्तिशाली सम्भव संयोजन छ। नयाँ नौसिखिया खेलाडीहरूले यसलाई पहिलो पटक परिभाषित गर्न सक्दछन्, यद्यपि यो एकदम सजिलो छ र अझ महत्त्वपूर्ण छ, यो ओमाहा उच्च लोमा जित्न को लागी जान्न आवश्यक छ। तपाईंको सन्दर्भको सुविधाको सम्झनाको लागि यहाँ एक सानो टिप हो: «पागल रकम» «2 + 3» हो। यसको मतलब यदि तपाईंको छेद कार्डहरु मा तपाईंको दुई कार्डहरु deuce (2) र Ace - तपाईं एक पागल को संयोजन संयोजन गर्दै छन्।
तर तपाईले समुदायमा आँखा राख्नु पर्छ (बोर्ड कार्डहरू, तालिकामा कार्डहरू) कार्डहरू, जुन तिनीहरूमध्ये तीन समावेश छन् 8 र ढोका र कुनै जोडेसँग कार्डहरू तपाईंको डिस र एसमा थपिनेछन् र ढिलाइ सम्भव संयोजन दायाँ बनाउँनेछन्। तिम्रो हातमा। तपाईंको लागि अर्को अनुकूल अपील डेनस र3र Ace द्वारा तालिकामा सिर्जना गरिनेछ। खेलको बखत दुई थप सामुदायिक कार्डहरू थप्न सकिन्छ, जस्तै 8 वा लो र दुई जोडे-जो जोडे लो कार्डहरू छन् - तपाईसँग निश्चित रूपमा पछाडि जानु हुनेछ। यस अवस्थामा हामी अत्यधिक मात्रामा सिफारिस गर्न सिफारिस गर्दछौं यस अवस्थाको रूपमा तपाईंसँग कम से कम लो हात बत्ती लिनको लागि उच्च संभावनाहरू छन्।
ओमाहा उच्च लो रणनीति पागल फ्लश
तपाईंले पहिले नै अनुमान गर्नुपर्दछ, सबै भन्दा राम्रो सम्भावित नट फ्लश संयोजन एक फ्लश हो। सबै खेलाडीहरूलाई थाहा छ कि कसरी पागलले कम से कम ब्रेक नजिकको बट्टाको उद्देश्यको लागि भेदभाव कसरी गर्ने। यस उदाहरणलाई हेर्नुहोस्:
तपाईंको छेद कार्ड: 2c - Ac
तपाईंको अधिकांश विरोधीहरूले फ्लश हृदयहरूको सम्भावनाको रूपमा सम्भव छ भने, तपाईं शान्त रहन सक्नुहुनेछ जस्तै तपाईले उच्चतम सम्भावित फ्लश - नट्स फ्लश पाउनुभयो। यस प्रकारको संयोजनलाई पहिचान गर्न सक्षम हुनुमा खेलमा तपाईंको परिस्थितिलाई अझ महत्त्वपूर्ण बनाउन सक्छ र तपाईंको शर्तको भोल्युम परिभाषित गर्न मद्दत गर्दछ।
ओमाहा हाई लो रणनीति तपाईंको बाधा बनाम तपाईंको प्रतिद्वंद्वी को बाधाहरु
आदर्श रूपमा तपाईंले आफ्नो प्रतिद्वंद्वीको सम्भव सम्भावना संयोजन कसरी परिभाषित गर्न सक्नुहुन्छ र तालिकामा त्यहि सूटको तीन कार्डहरू थाहा पाउनुपर्छ। तपाईंले यो कुरा सोच्नु पर्छ कि यस्तो स्थितिमा कम्तिमा तपाईंको एक विरोधीले सैद्धान्तिक रूपमा फ्लश हुन सक्छ। यस अवस्थामा यदि तपाई 100% हो भने तपाईंको हात फ्लश हराउन पर्याप्त बलियो होइन - तपाईले गुनासो गर्नुपर्छ। अर्कोतिर यदि तालिकामा सामुदायिक कार्डहरू हल्का बनाउँदछ सिधा रूपमा 3-4-6-8- 9, यदि तपाईसँग कम्तिमा सीधा सिधा वा एक हात बलियो बलियो हुन्छ भने यसलाई अझ राम्रो हुनेछ। यसको विपरीत - तपाईं राम्रो हुन्छ।
उल्लिखित उदाहरणमा 3-4-6-8, त्यहाँ कम्तिमा9तरिकाहरू छन् तपाईंको सीधा कार्डको दुई र5बाहिर3सामुदायिक कार्डहरूसँग सिधा तालिकामा।
यद्यपि यी उदाहरणहरू विज्ञान कथा र तथ्याङ्कहरू बीच कहीं पनि देखिन्छ, हुनत उनीहरूले स्पष्ट रूपमा प्रतिवादीहरूको सम्भावित कार्डमा खेलाडीको उच्च ध्यानको आवश्यकता देखाउँछन्।
ओमाहा उच्च लो हाई ह्यान्ड्स रणनीति
यस गेममा जित्ने विजेता संयोजनहरूको एकदम महत्वपूर्ण कुरा हो, यस तथ्यको लागि तयार रहनुहोस् कि तिनीहरूका संख्या टेक्सास होल्डममा सम्भव संयोजनको संख्यामा गम्भीर रूपमा हुनेछ। त्यसैले बुझ्न निश्चित गर्नुहोस् कि तीन प्रकार वा एक जोड़ी अब सम्म कुनै संयोजन छैन जुन अक्सर ओमाहामा जित्छ।
ओमाहामा सामान्य गल्ती
सबै भन्दा सामान्य सामान्य खेलाडीको गल्ती भनेको छ कि तिनीहरू छेद कार्ड प्राप्त गरेपछि शुरुवात हातको मूल्य परिभाषित गर्न गडबड हुन्छ। यो कारणले गर्दा टेक्सास होल्डममा खेल्दा उनीहरूले प्राय: पोकर संसार पत्ता लगाएका छन् र ओहोहा पोकरमा खेल गर्दा उनीहरूले उनीहरूको उच्च कार्डहरू अधिकृत गर्छन्।
उदाहरणका लागि एप्सको जोडाले PF (पूर्वफ्लप) को लागि एकदम बलियो बलियो संयोजन देखा पर्यो, जबकि यो प्रायः कुनै विजेता एक प्रतीत हुन्छ जस्तो देखिन्छ जब फ्लपले तेस्रो अङ्क देखाउँदैन।
अर्को जादुई नयाँ खेलाडीहरूको गल्ती सम्झौतापछि उच्च जोडा दायाँको स्थितिमा अनियन्त्रित उठाइन्छ। यस्तो स्पष्ट उठाइ सामान्यतया अनुभवी खेलाडीहरूले शर्त र उठेर बीचमा समानांतरहरू ढाल्छन् जो फ्लपमा बलियो कार्डको प्रतीक्षा गर्दै गर्दा भविष्यवाणी गर्दछ।
अर्को स्पष्ट गल्ती हो कि कुशलता को लागी आत्म-स्पष्ट प्रयास। त्यसो भए यो यो गल्ती हो कि एक शुद्ध आपत्तिजनक हुन सक्छ जब अधिकांश खेलाडीले यो ब्लेफ अघिल्लो शर्तको बीचमा सार्नु पर्ने र उठाउँदछ र बढ्दै जान्छ र यसैले ब्लीफ अनावश्यक रहनेछ। त्यसैले यहाँ नयाँ ओमाहा पोकर खेलाडीहरूको लागि सानो टिप हो: तपाईंको उचित नाम राख्नुहोस् र ब्लिफाइजबाट जोगाउन प्रयास गर्नुहोस् जबसम्म तपाईले तपाइँको परिभाषित रणनीतिको लागि पर्याप्त महसुस गर्नुहुन्न।
टेक्सास होल्डममा ओमहाबाट स्विच गर्दा केही नयाँ खेलाडीले स्पष्ट रूपमा पारंपरिक होल्डम र ओमाहा हाई-लोको बत्तीको बीचको समानांतरलाई ध्यान दिनेछन् जुन माथिको राम्रो हुन्छ।
जबकि टेक्सास होल्डममा खेल्ने प्रायः खेलाडीहरूले फ्लप पछि गुमाएपछि, ओमहाका खेलाडीहरूले4छेद कार्डहरूसँग हातमा एक विशाल संख्यामा बाधाहरू सम्भावित पहिलो कार्ड पछि आफ्नो कार्डहरू सम्भव छैन।
नयाँ खेलाडीहरूको लागि अर्को साधारण गल्ती फ्लप पछि आफ्नो कार्डहरू पागलसँग (पछाडि उच्चतम संभव हात) सँग मेल खान हुँदैन। उदाहरणका लागि तपाईंले फ्लप पछि पागल हुन पाउनुभयो, चलो भन्छ कि यो उच्च सीधा एस संग थियो। त्यसो भए के हुन्छ? खेलाडीले तपाइँको निर्णयको निर्णय नगरेसम्म उठाउनेछ। र जब खेलाडीहरू फ्लशको प्रतीक्षा गर्नुको सट्टा दाबी गर्न स्पष्ट छन्, तपाईंको उत्तम निर्णय तपाईंको कार्डहरू तहमा र तपाईंको राम्रो क्षण छान्नेछ।
पोष्ट सीमा के हो?
पोट सीमा एक प्रकारको ओमाहा पोकर हो, जुन PL को रूपमा पनि जान्छ। यसको अर्थ यो प्रकारको खेलको कुनै पनि शर्त वा उठ्छ बर्तनमा रकम मेल खान्छ। अन्य शब्दहरूमा, पट्टिको गोलको दौडान बर्तनको मात्रा सीमाको रूपमा अभिनय गरिनेछ। पहिलो शर्त दाँयामा अधिकतम शर्त सानो र बिग ब्लाइन्डको योगको बराबर हुनुपर्छ। उदाहरणको लागि, 10 \_ 20 शर्त सीमा खेलमा, पहिलो शर्त बिग र सानो ब्लाइन्डको योग भन्दा बढी हुनुपर्दछ, हालको उदाहरण शर्तमा 30 भन्दा बढी हुन सक्छ। त्यसकारण, अर्को खेलाडीले 30 को मात्रामा शर्तसँग मेल खान सक्छ वा यसलाई 60 माथि उठाउन सक्छ।
अनानास ओपन फेस चेन पोकर - एक किसिमको चिनियाँ पोकर जसले दोस्रो मोडल खेलाडीबाट तीनवटा कार्डहरू सामना गर्दछ, जसको मध्ये एक हुनुपर्छ। अन्तमा विरोधहरूले मात्र दुई कार्डहरू हेर्छन्, तिनीहरूका लागि तेस्रो अवस्थित रह्यो।
खेल 52 कार्डहरूको मानक डेकसँग खेलिएको छ (2 बाट Ace, कुनै जोकरहरू)। सूट बराबर छन्। पाइनापपल -3मा अधिकतम खेलाडीहरू।
यसैले, खेल5घुमाउदछ:5+2+2+2+ 2
कल्पनाको अवस्थामा, खेलाडीले 14 कार्ड प्राप्त गर्दछ, जसबाट 13 प्रयोग गरिनु पर्छ र 1 खारेज गरिएको छ।
खेलहरूको लक्ष्य भनेको सबै भन्दा शक्तिशाली बिरुवाहरू विरोधीहरूलाई हराउन र थप बिन्दुहरू एकत्रित गर्न हो। राउन्ड जीतको अन्तमा सबैभन्दा ठूलो अंकसहित खेलाडी।
खेल 52 कार्डहरूसँग खेल्न सकिन्छ। त्यहाँ कुनै सामुदायिक कार्डहरू वा बेल्टिंग गोलहरू छैनन्।
हातमा कार्डहरूको निवारण।
कार्डहरू5सडकमा वैकल्पिक रूपमा निलम्बित छन्।
- 1st सडक -5कार्डहरू निलम्बित छन्।
खेलाडीले सबै5कार्डहरू बक्समा राख्नु पर्छ
- 2nd सडक -3कार्डहरू निलम्बित छन्।
2 बाट सुरु हुँदैnd सडक प्लेयरले बक्समा2कार्डहरू राख्नु पर्छ र 1 कार्ड खारेज गर्नुपर्छ।
- 3rd सडक -3कार्डहरू निलम्बित छन्।
- 4th सडक -3कार्डहरू निलम्बित छन्।
- 5th सडक -3कार्डहरू निलम्बित छन्।
प्लेयरले तीनवटा बक्समा सबै कार्डहरू राख्नुपर्छ:
- अगाडि - माथिल्लो बक्स3कार्डहरू (सबैभन्दा कमजोर)
सम्भावित संयोजनहरू: तीन प्रकारका, एक जोडी, उच्च कार्ड र इत्यादि बलियो संयोजनका लागि कम्तीमा4कार्डहरू प्रयोग गर्नुपर्दछ।
-5कार्डहरू (मध्य) सँग मध्य - मध्य बक्स
- पछाडि -5कार्डहरूसँग निचो बाकस (सबैभन्दा बलियो एक)
बक्सहरूको नियम: अगाडि बक्सले मध्य बक्सलाई हराउन सक्दैन, बीचको बाकस फिर्ता बक्सलाई हराउन सक्दैन। सम्वन्धहरू क्रमशः क्रमशः क्रमशः क्रमबद्ध रूपमा क्रमबद्ध हुनुपर्छ। समान संयोजन अनुमति छ। यदि यो नियम सम्मानित छैन भने, हात फ्लोलको रूपमा मानिन्छ र खेलाडीले कुनै बिन्दु प्राप्त गर्दैन।
खेल सुरूको पुष्टिकरण
जब तालिकामा कम्तिमा2खेलाडीहरू खारेज गरिन्छ, प्रत्येक खेलाडीले पुष्टि गर्नुपर्छ कि त्यो खेल सुरुको लागि तैयार छ। खेल सुरु नभएसम्म सबै खेलाडीहरू यो पुष्टि गर्नुहोस्। पुष्टि गर्न, खेलाडीहरू पप अप विन्डोमा प्ले चयन गर्नुपर्छ।
पहिलो स्ट्रीटमा भएको हातको सुरुवात पछि, खेलाडी, जो डिलरबाट बाँयामा रहेको हो, एक्सएनएमएक्सएक्स कार्डहरू पेश गरिन्छ। सबै खेलाडीहरूले यी कार्डहरू देख्न सक्छन्।
खेलाडीले सबै5कार्डहरू तीन बक्समा राख्नु पर्छ। खेलहरू पूर्ण रूपमा खुला छ। खेलाडीहरूसँग कुनै अज्ञात कार्डहरू छैनन्। सबै कार्डहरू बक्समा राखिएको छ, जसको सामग्री सबै सहभागीहरूका लागि उपलब्ध छ। खेलाडीहरू एकै ठाउँमा एक कार्डहरू राख्छन्। पहिलो सडकमा बाहिर निकाल्ने प्रक्रिया सबै खेलाडीहरू देखिने देखिन्छ।
1 मा सार्नुहोस्st सडक
एकपटक प्लेयरले सबै कार्डहरू पछाडि एकपटक, "तयार" बटन उहाँका लागि उपलब्ध छ। बारीको अन्त सम्म, खेलाडीले कुनै पनि कार्डहरू परिवर्तन गर्न सक्छ।
चालको अन्त्य पछि, अर्को खेलाडीले5कार्डहरू र त्यसमा पूरा गरेको छ, पहिलो सडक पूरा नभएसम्म।
बाहिरी सडकमा चल्ने अन्त्य।
दोस्रो सडकबाट सुरु हुने र सबै खेलाडीहरूसँग 13 कार्डहरू राखिएका छन्, खेलाडीले तीनवटा अनुहार कार्डहरू प्राप्त गर्छन् र दुईवटा बक्सहरूमा बाहिर राख्छन्। "रद्द" बटन थिच्दै रिमिङ कार्ड खारेज गरिएको छ। तेस्रो कार्ड खारेज गरेर, दुई अन्य खोलियो। खेलाडीले अघिल्लो सडकमा राखिएका कार्डहरू सार्न सक्दैन।
प्रत्येक खेलाडीसँग एउटै समय हो जुन हरेक सडकमा कार्डहरू राख्ने -2मिनेट। पहिलो सडकको साथमा एक काउन्टडाउन छ। दोस्रो सडक प्लेयरमा पहिलो र आदि भन्दा कम समय छ। यदि एक खेलाडी समय भन्दा बाहिर छ भने, उसको अतिरिक्त समय बैंक हुनेछ -3मिनेट। यदि खेलाडीले सबै समय प्रयोग गर्दछ, तर अझै पनि बाँकी कार्डहरू छन्, तिनीहरू स्वचालित रूपमा राखिनेछन्।
यदि खेलाडी समय भन्दा बाहिर छ भने, उसको कार्ड स्वचालित रूपमा राखिएको छ:
- कार्डहरू प्राप्त भएको क्रममा राखिएको छ, पहिलो तलको रेखामा, त्यस पछि बीच र माथिल्लो मा।
- दोस्रो सडकबाट सुरुवात पहिलो दुई कार्डहरू प्राप्त गरिएका छन् र तेस्रोलाई खारेज गरिएको छ।
यदि खेलाडीले सर्भरसँग विच्छेदन गरेको छ भने, "टाइम बैंक" लाई पनि सुरुवात गरिएको छ -3मिनेट। यदि सबै "टाइम बैंक" खेलाडीको अन्त्यमा सर्भरसँग जडान स्थापित गर्न व्यवस्थित छैन भने, उनीहरूको हाल स्वचालित रूपमा निलम्बित र गणना गरिनेछ, खेलाडीलाई "सिट आउट" मा सारिनेछ र खेल जारी राख्ने छैन घटनाहरू, जहाँ प्रतिवादीले "काल्पनिक" व्यवहार गर्ने अधिकार छ। चिनियाँ पोकरका नियमहरू "काल्पनिक" सक्रिय हातको निरन्तरता हो, यही कारणले खेलेको छ र मात्र खेलाडी पछि "सिट आउट" मा सारिनेछ। खेलाडीले अर्को तालिकामा चल्न पछि टाइम बैंक पुन: प्रयास गर्दछ।
स्कोर र बोनस।
ह्यान्ड स्कोरको अन्त्यमा सारांश हुन्छ। अंकहरू प्रत्येक खेलाडीको हातको जोडी जोडीको तुलनामा प्रदान गरिएको छ। प्रत्येक जोडामा सम्बन्धित संयोजनहरू तुलना गरिन्छन्: उच्चतमसँग उच्चतम, औसतसँग औसत र तल्लो तहमा औसत।
कुनै पनि हातमा ड्राको स्थितिमा (उदाहरणका लागि दुवै खेलाडीहरू तलको रेखामा बराबर फ्लैश छ) कुनै पनि खेलाडीले यो हातका लागि बिन्दुहरू प्राप्त गर्दैनन्।
नियमहरू स्क्यान गर्दै।
त्यहाँ स्क्यानिङ गर्ने दुई तरिकाहरू छन्:
प्लेयरले हरेक जित्ने हातको लागि 1 बिन्दु हुन्छ।
यसबाहेक, प्लेयरले 1 बिन्दुहरू प्राप्त गर्दछ भने उसले2तीन हात वा तीनवटा हातबाट बाहिर जित्यो।
ड्राको अवस्थामा कुनै पनि खेलाडीले अंक प्राप्त गर्दैन। तर यदि खेलाडीले दोश्रो हातले जित्छ भने, उसले तीन अंक प्राप्त गर्दछ - प्रत्येक जीउ र हात र एक थपको लागि।
अतिरिक्त रूपमा, प्लेयरले3बिन्दुहरू प्राप्त गर्दछ भने उसले तीनवटा हात जित्यो।
यदि हात खेलाडीको अन्त्यमा उनीहरूको शक्तिको क्रम असफल हुँदा संयोजन बनाइयो भने, हातले फ्लोले जस्तो मानिन्छ। यस अवस्थामा सबैको संयोजन को रूपमा मानिन्छ हराएको अरूलाई र उहाँले कुनै बिन्दु प्राप्त गर्नुहुन्न तर प्रत्येक खेलाडीलाई6बिन्दुहरू र बोनस बिन्दुहरूको राम्रो रकम भुक्तानी गर्दछ।
यदि दुई वा बढी खेलाडीहरू "चौंरी" छन् भने तिनीहरूका हातहरू प्राप्त हुन्छन्0तुलनात्मक अवस्थाको बिन्दुमा।
एक जीत को लागि अंकहरु को अतिरिक्त, खिलाडिहरु को संयोजन को लागि रियल्टी संग सम्मानित गरिन्छ, बिना वितरण को परिणाम।
फेलहरू रोयल्टीहरू प्राप्त गर्दैनन्।
एक्सएनएमएक्स-कार्ड स्टड उन क्लासिकल पोकर मध्ये एक हुन मानिन्छ, यद्यपि यदि तपाईंलाई यकीन छ कि पारंपरिक टेक्सास होल्डम तपाईं को लागि एक चुनौती छैन, तपाईं निश्चित रूप देखि7कार्ड स्टड को कोशिश गर्नु पर्छ। यो खेल सबैले7कार्डहरू भन्दा राम्रो 5-कार्ड संयोजन बनाउने कामको बारेमा हो।7कार्ड स्टडको मुख्य सिद्धान्त सबै निलम्बित कार्डहरू सम्झन र तपाईंको सुरुवात हात क्षमताको बारेमा पूर्णतया सजग हुनु हो। यस तथ्यको बावजूद कि7कार्ड स्टड धेरै तरिकाहरुमा खेलाडी को रूप मा धेरै को क्लासिकल पोकर खेलहरु जीत को संयोजन को समानता को कारण खेलाएको छ, यद्यपि यो एक अंतर को विविधता छ जो ध्यान मा ध्यान केंद्रित गर्न को लागी।
7 कार्ड स्टडको प्रमुख मतभेदहरू मध्ये एक हो कि बेल्ट राउन्ड वा सम्पूर्ण खेल सुरु गर्नको लागि यहाँ कुनै पनि ब्लिमलाई प्रयोग गरिन्छ। यहाँ सबै खेलाडीहरू सेट तालिका सीमामा आधारित रकममा दावी राख्नु पर्छ।
प्रत्येक प्लेयरले जबरजस्ती शर्तलाई पनि एन्ट भनिन्छ। यस प्रकारका अनिवार्य दाँतको आवाज तालिका सीमामा निर्भर हुन्छ, सामान्यतया फरक आवश्यक शर्तको 10-25% बाट भिन्न हुन्छ। प्राय: प्रायः प्राय: प्राय:7कार्ड स्टड तय गरिएको स्थिर सीमाहरूसँग खेल्दछ।
हात सुरु गर्दै
यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा रोगी रहनु हो जुन ती वास्तवमा शक्तिशाली शुरुवात हातहरू, जुन तुरुन्तै जित्ने ग्यारेन्टी दिइनेछ, निकै गाह्रो हुन्छ। यसैले फ्लप पछि तपाईका कार्डहरू ठीक राख्न अघि तपाईले एक संकीर्ण अनुसन्धान गर्नु पर्छ र तपाईंको डेककार्डहरूसँग सबै सम्भावित भेरियहरुको गहन विश्लेषण गर्नु पर्छ।
तपाईंको कुनै पनि प्रकारको पोकर गेमको साथ तपाईले देखाउन सक्दछ, वास्तवमा अभ्यास र गहिरो सचेत दृष्टिकोण भन्दा बढी कुशल र सार्थक छैन। यसैले हामी यहाँ पारंपरिक वा सामान्यतया स्वीकृत विशेष जादू प्रणालीमा बसोबास गर्न हौं जसले तपाइँलाई जित्न मद्दत गर्नेछ। यहाँ तपाइँलाई यो थाहा छ कि खेलको नतिजा साथै तपाइँको व्यक्तिगत सफलताको परिणाम मात्र तपाइँको प्रतिद्वंद्वी पढ्ने क्षमतामा निर्भर हुन्छ। हामी यस मुद्दालाई अझ बढी विस्तारमा ठेगाना गर्नेछौं।
धेरै पोकर खेलहरूको विरोधको रूपमा, तपाइँ यहाँ कुनै पनि समुदाय कार्डहरू सामना गर्नुहुन्न। प्रत्येक खेलाडीले भरिएको7कार्डहरू पूरा गरेको छ। अन्तिम चरणमा पुग्ने सबै खेलाडीहरूले5कार्डहरू भन्दा राम्रो 7-कार्ड संयोजन बनाउन सक्दछ। सामान्य रूपमा, यो खेल मानक 52 कार्ड डेक प्रयोग गरी खेलिएको छ। अर्थात् कार्डहरूको संख्याले मानिसहरूको संख्या निर्धारण गर्छ, जुन एक खेल सत्रमा खेल्न सक्छ। सात कार्ड स्टडमा खेलाडीहरूको संख्या दुई देखि अधिकतम आठ सम्म भिन्न हुन्छ। र अब हामी सम्पूर्ण खेल प्रक्रिया सही क्रम मा देखौं। टेक्सास होल्डम र ओमाहा पोकरको विरोधको रूपमा, केवल सातौं कार्डको स्ट्याट शर्त सीमासँग खेल्दछ। सात-कार्ड स्टडमा तपाईले कुनै पनि पोट सीमा वा खेलको कुनै सीमा प्रकार फेला पार्न सक्नुहुन्न। हालको लेखमा हामी निम्न उदाहरणलाई विचार गर्नेछौं: निश्चित सीमा7\_ 10 सँग 20-कार्ड स्टड।
खेल सुरु हुन्छ
व्यापारीले आफ्नो बायाँ घडीको दिशाबाट सुरु हुने खेलाडीहरूलाई पहिलो कार्डलाई सम्बोधन गर्नु अघि प्रत्येक खेलाडीले अनिवार्य दाबी गर्नु पर्छ, जुन पनि एन्ट भनिन्छ। एन्ट को मात्रा सामान्यतया तालिका तालिकाको 1 \_5को बारेमा हो। अनटे यहाँ यहाँ एक समान भूमिका खेल्छ किनभने पारंपरिक टेक्सास होल्डममा ब्लाइन्ड्स - यो बर्तन भर्न सुरु भएको छ।
त्यसोभए पहिलो सम्झौता निम्न हो: सबै खेलाडीहरूले दुईवटा कार्डहरू ढाल्छन्। एक पटक व्यापारीले प्रत्येक खेलाडिको लागि दुईवटा कार्डहरू ठिकेपछि, त्यो एक थप कार्डको सौन्दर्य हुन्छ, तर यो समय अनुहारमा छ। सबै कार्डहरू अनुहारमा टेबलमा बसिरहेका छन्। त्यसैले अब प्रत्येक खेलाडीले एक अनुहार छ र तीनवटा कार्डहरू तल छ। पहिलो ब्याट्री राउन्डलाई "तेस्रो स्ट्रीट" भनिन्छ र यसलाई खेलाडी र सट्टा द्वारा उच्च कार्ड देखाउने खेलाडीको साथ सुरु हुन्छ।
सूटहरू उच्चतमबाट क्रमबद्ध गरिएको छ: स्पेस, हार्ट, डायमण्ड्स र क्लबहरू।
सबै भन्दा कम कार्डको साथ देखाइएका खेलाडीले "दर्ता" शर्तको रूपमा जाने बाध्यता शर्त बनाउन आवश्यक छ। यो शर्त सामान्यतया तालिकाद्वारा सेट गरिएको छ। हाम्रो उदाहरण पछ्याउनुहोस्, 10 \_ 20 सीमाहरूसँग, यहाँ एन्टि2को बराबर हुनेछ। ल्याइज-इन शर्त पछि अर्को खेलाडीले खेलाडीको तत्काल बाँयामा ल्याइ-इन शर्त बनाइयो र विकल्प, कल गर्दै वा सामान्य रूपमा शर्त बढाउँदै छन। खेलको पहिलो चरणमा उठाउने रकम 10 भन्दा बढी हुनुपर्दछ (तालिकाको निचला सीमा)। प्रत्येक दौरले प्रत्येक खेलाडिबाट मात्र एक शर्त र तीन उठाउँछ अनुमति दिन्छ, फलस्वरूप यस विशेष अवस्थामा अधिकतम शर्त 40 हो।
सबै खेलाडीले उनीहरूको दाबी गरेपछि डीलरले अर्को अनुहार कार्डलाई पारंपरिक रूपले "चौथो स्ट्रीट" भनिन्छ। कार्डहरूमा निलम्बित, अर्को बेन्टिङ दौर प्लेयरको साथ उच्चतम हात देखाउँदै सुरु हुन्छ। खेलको पहिलो चरणमा उठाउने रकम 10 भन्दा बढी हुनुपर्दछ (तालिकाको निचला सीमा)। एक जोडा देखाउने खेलाडीले 20 (उच्च तालिका सीमा) दावी गर्न अनुमति दिएको छ। सबै खेलाडी खेलाडीको बायाँबाट सुरू गर्ने उत्तम कार्डहरू देखाउँदा, तिनीहरूको निर्णयहरू गर्नका लागि।
दोस्रो बेन्टिङ राउन्ड पछि, अर्को कार्ड आउनको लागि पनि छ र "पाँचवा स्ट्रीट" भनिन्छ। त्यसैले यस पल सम्म प्रत्येक प्लेयरमा5कार्डहरू छन्:3अनुहार कार्डहरू र2छेद कार्डहरू। यस राउन्डमा पहिलो शर्तको रकम 20 हो। अर्को बेन्टिङ राउन्ड फेरि खेलाडीको साथ उच्चतम हात देखाउँदै सुरु हुन्छ।
त्यसोभए तेस्रो ब्याटिङको दौड समाप्त हुन्छ र व्यापारीले अन्तिम खेलाडीलाई प्रत्येक खेलाडीलाई कार्ड पुर्याउँछ र यो दौरलाई "छैट स्ट्रीट" भनिन्छ। फेरि betting दौर खेलाडीसँग उच्चतम दृश्य कार्डहरू देखाउँछ र शर्तको मात्रा उच्च सीमा अनुसार अनुसार।
र बेल्टिंग पछि, डीलरले प्रत्येक खेलाडीलाई अन्तिम कार्डको सम्झौता गर्दछ र यो कार्डलाई अनुहारमा राखिएको छ। पोकर समुदायमा सात कार्ड स्टडमा अन्तिम कार्ड प्रायः "तल र गहिरो" भनिन्छ। यो कार्ड अन्तिम ब्याट्री राउन्ड पछ्याइएको छ र आवश्यक शर्तको रकम स्थिर छ।
अब प्रत्येक प्लेयरले आफ्नो अन्तिम हात बनाउनको लागि तिनका सात कार्डहरूको प्रयोग गर्दछ। कुन संयोजन राम्रोसँग निर्णय गर्ने निर्णयमा, सबै खेलाडिहरूले तिनीहरूको कार्डहरू प्रकट गर्छन् र यी कार्ड संयोजनहरूको सबैभन्दा राम्रो भाग बर्तन जित्छन्।
रेजज7कार्ड स्टडको एक संस्करण हो जुन सबैभन्दा कम कम हातले बर्तन जीत्यो। खेल दुई देखि आठ खेलाडीहरूले प्ले गर्न सक्छन्। यो 52 कार्ड डेकसँग कुनै पनि खेलाडीहरू छैनन्। प्रत्येक खेलाडीले कुल सात कार्डहरू लगाएको छ, तर विजेता निर्धारण गर्नको लागि केवल उत्कृष्ट 5-कार्ड कम हात प्रयोग गरिन्छ।7कार्ड स्टडमा हाई / लो, रिजमा बिरोध गर्न कुनै 'आठ वा राम्रो' को आवश्यकता छैन।
त्यो सम्झनुहोस् (सात कार्ड स्टड हाय / लो र ओमाहा हाई / लो को विपरीत), त्यहाँ कुनै 'क्वालिफायर' छैन, सबैभन्दा राम्रो कम हातले सम्पूर्ण बर्तन जीतन्छ।
यो खेल धेरै उत्साहित छ किनभने2बाट6बाट निचला कार्डहरू डेकबाट हटाइन्छन्, त्यसैले तपाईं धेरै उच्च कार्डहरू समाप्त गर्नुहुन्छ, र तीन प्रकारको वा पूर्ण घर प्राप्त गर्न सजिलो छ। जब तपाईं खेल्नु हुन्छ मनमा राख्नुहोस् - तपाईंको हात राम्रो हुन सक्छ, तर तपाईंको विरोधीहरूको हात हो!
यो खेल2सँग5खेलाडीहरूसँग खेलेको छ।
3 ब्लाइन्डहरू - सानो, ठूलो, र3भन्दा बढी खेलाडीहरू (2-3 प्लेयरहरू मात्र साना र ठूला ब्लाइन्डहरूमा बदल्छ)।
कार्ड आदान प्रदान गर्दा, डीलर सुरु भएपछि पहिलो खेलाडी (जस्तै5कार्ड ड्रा), तर दोस्रो राउन्डमा, ओभरब्लन्डिपछि (एण्ड डीलर पछि) कार्य सुरु हुन्छ। एक माथिको अवस्थामा (केवल2खेलाडीहरू) यो क्रिया सानो अन्धाबाट सुरु हुन्छ।
प्लेयरले अधिकतम4कार्ड त्याग्न सक्छ।
उठाईको लागि समय सीमा 10 सेकेन्ड हो, पछि तपाईले मात्र जाँच गर्न सक्नुहुन्छ, कल वा गुना।
स्ट्रिङ डेक: रैंकको कार्ड 2-6 हटाइएका छन्, खेलमा कति खेलाडीहरू छन्।
अक्षहरूले उच्च वा कम खेल्न सक्छन्, त्यसैले तपाईले सिधा ए-7-8-9-10 वा 10-JQKA सक्नुहुनेछ।
पेरोल विशेषताहरूले खेलाडीलाई पट्टि विभाजन गर्न अनुमति दिन्छ (2nd बिटिङ राउन्ड मात्र)।
टाँस्नु सट्टामा तोड्न सकिन्छ।
32 कार्ड ड्रा पोकरमा ह्यान्ड रैंकिंग फरक छ।
पोकरको अपेक्षाकृत नयाँ भिन्नता, जुन को सुविधाहरू जोड्दछ टेक्सास होल्डम, पोकर कोर्नुहोस् र Razz.
प्रत्येक खेलाडीले चारवटा कार्डहरू लगाएको छ, र निम्न तल्लो हात जीत - विभिन्न स्थान र सूटको चार कार्ड। खेल अधिकतम छ6खेलाडीहरू खेल्न सकिन्छ र 52 कार्ड डेकसँग खेलेको छ। Ace सधैं कम कार्ड हो।
सम्झौताको सुरुवात टेक्सास होल्डमसँग समान छ - दुई खेलाडिले डीलरको बायाँ पोष्ट सानो र ठूलो अन्धामा पोष्ट गर्न। त्यस पछि खेलाडीहरूले चारवटा कार्डहरू टिपेर लगाउँछन् र ठूलो अन्धाको बायाँमा एक खेलाडीले पहिलो बेल्जियमको गोल सुरु गर्छ।
खेलमा चार सट्टा राउन्ड समावेश छ। तीनवटा ड्राइभ राउन्डको दौडान खेलाडीहरुले आफ्नो हातबाट शून्यदेखि चार कार्डहरू व्यापार गर्न सक्छन्। चौथो बेल्टिंग अन्त्य पछि, बाँकी खेलाडीहरू तिनीहरूको कार्डहरू तालिकाको घडीको दिशामा घुमाउँछन्। सबैभन्दा राम्रो हातले खेलाडीले बर्तन जीत्यो।
ह्यान्ड रैंकिङ (घट्दो)
Badugi यो हात हो जुन विभिन्न स्थान र सूटको चार कार्ड छ, जुन उत्तम हो 4-3-2-А.
तीन-कार्ड हात - विभिन्न सूटहरूको तीन नपढिएका कार्डहरूबाट बनाइएको छ।
दुई-कार्डको हातमा विभिन्न सूटहरूको दुई नराम्रो कार्डहरू छन्।
एक-कार्ड हात - कम कार्ड जीत।
Badugi मा सबैभन्दा खराब हात हो К-К-К-К.
सबैलाई यस नयाँ खेलको बारेमा सम्बोधन गरिएको छ जुन म्याकाउ तालिकाहरूमा आइपुगेको छ जहाँ आइव्वे र दुवानले6प्लस होल्ड'मा भनिन्छ। पहिलो नजरमा, यो नयाँ खेलाडीहरूको लागि एक धेरै उत्साहित र आकर्षक खेल जस्तो लाग््छ! यो मजा खेलाडीलाई अनलाइन प्ले गर्नको लागी नयाँ क्रिस मनीमेकर हुन सक्छ, र राम्रो कुरा हो, यदि तपाइँ कसरी टेक्सास होल्डम राम्रोसँग खेल्नुहुन्छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ, तपाइँसँग यो नयाँ खेल मोडमा सजिलो संक्रमण हुनेछ।
टेक्सास6प्लसको मुख्य भिन्नता कार्डहरूको संख्या हो (36 को सट्टा 52) र संयोजनको शक्ति:
टेक्सास6+ कम से कम दुई खेलाडीहरु संग एक खेलाडी को लागी अधिकतम 10 खिलाडिहरु लाई खेले जान सक्छ। यो जोकर बिना 36 कार्ड डेक (6 देखि Ace सम्म) खेलिएको छ। प्रत्येक प्लेयरले दुई कार्ड प्राप्त गर्दछ, तल अनुहार। यी कार्डहरू होल कार्डहरूको रूपमा चिनिन्छन्। त्यसपछि, व्यापारीहरूको हातमा पाँच समुदाय कार्डहरू उठ्छन्। खेलाडीहरूले संयोजन बनाउनका लागि कुनै पनि पाँच कार्डहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। उत्तम5कार्ड संयोजन बर्तन जीता छ।
पोकरडम क्यासिनो बोनस कोडहरू
पोकरमामा नयाँ खेलाडीहरूको लागि बोनस 1000R
सूपविज्ञापनएपीआईआईसीआईटी ('p21661p3144303Pb6f5', 'p'); पोकरमामा नयाँ खेलाडीहरूको लागि बोनस 1000R ... अधिक ››
Pokerdom कुनै जम्मा बोनस
$ 4,000 - Pokerdom स्वागत बोनस
$ 777 FREE + 33 कैसीनो मा मुफ्त स्पिन